ko htike's prosaic collection: စိတ်ဝင်စားစရာ ပါပဲ။
Posted by ကိုထိုက် at 13:30
တကယ်ကို ရူးသလိုလိုပေါသလိုလိုပဲနော် ပြောနေတာ တဟဲဟဲနဲ့ ...
စစ်တပ်ကကောင်တွေ တည်ငြိမ်မှုကို မရှိဘူး လိမ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ လမ်းဘေးကပွဲစားလောက်တောင် အဆင့်မရှိဘူး နောက် စစ်တပ်က ကောင်တွေ တယောက်လာ ဒီပုံစံဘဲ ခင်ညွှန့် ဗိုလ်မြနဲ့တွေ့တုန်းကလဲ ဒီလိုဘဲ ခုလာပြန်ပြီ နောက်တကောင် ရူးပေါပေါ နဲ့ ဘယ်လိုပြောမလဲ ခွေးအမှီးနှံ့သလို တပုံစံတည်းဘဲ
1 December 2009 at 17:20
ဗိုလ်ခင်ညွန့် နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြ တို့ တွေ့ တုံးက ဗိုလ်ခင်ညွန့် ရဲ့ လေသံအတိုင်းပဲ။ တိုင်းရင်းသားတွေ ကရိုးပေမယ့် ရူးတော့ မရူးဘူး။
ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်သူပြောနေကြတာလဲ နာမည်လေးတွေတော့ သိချင်ပါတယ်။
2 December 2009 at 06:39
အာဏာပိုင်ဖက်ကလူတွေတော့မသိဘူး အဲမှာကလေးလို အရုးလို အဆက်ဆံခံရတဲ့ဖထီးတော့ KNU/KNLA ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ် မှူးချုပ် စောဌေးမောင် ဖြစ်ပါတယ်။
2 December 2009 at 21:25
ကိုယ့်တိုင်းပြည်က အာဏာပိုင်ဆိုတဲ့ ဟာတွေကို ကြည့်ရတာ.. ရှက်တာပဲ..။
3 December 2009 at 03:26
တစ်ခါခံရ ရင် လိမ်တဲ.သူအပြစ်..
နှစ်ခါခံရ ရင်ခံရတဲ.သူအသုံးမကျတာ ဆိုတော.
ဖထီး ရေ သတိသာထားပေတော.
ရိုးသားတာ နဲ. အသုံးမကျတာ
မြန်မာဖက်က လူကတော့ တပ်မတော်လေ့ကျင့်ရေး အရာရှိချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ဘဲ ရှိပါသေးတယ်။
ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီး နိုင်ငံရေးစကားတွေ ပြောနေတာ အကြည့်ရအခက်ဆုံးပဲ။
Myint Zu Zu said...
Ilike your Blogger and again more write news and photos.
What kind of political discussion is this? Do they have any manners. While the leader is sitting talking, the subordinate are standing around. Even they don't know proper manner at negotiating room, how can they govern the country with this kind of manner and ill discipline.
Burma/Myanmar Alternative said...
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥ့ဒေ (၂၀၀၈) ကို နဲနဲမှ နားမလည်တဲ့ ထိန်မောင် လိုအရူး၊ စစ်ဝတ်စုံဝတ်ပြီး ခါးမှာ သေနတ်ထိုးတိုင်း ဖင်ခေါင်းကြီး ဖါသယ်မတွေထက် ကျယ်နေတဲ့ ဗမာ စစ်ဗိုလ်တွေ၊ ဒီလိုလူတွေ ကြောင့် ကြားကနွား ဖြစ်နေတဲ့ (ကျွန်တော်တို့ တိုင်းသူပြည်သားတွေ ဒုက္ခအတိ) ရောက်နေရတာ။
၂၀၁၀ နှစ်သစ် ဆန္ဒမွန်များ
ပြည်ပအားကိုး၊ ပုဆိန်ရိုး၊ အဆိုးမြင်ဝါဒီ ကင်းပါစေ..
မင်းကောင်းရာဇာ၊ အဖြာဖြာ၊ ကမ္ဘာအနှံ့ ၊ပေါ်ပါစေ..
အမျိုး ၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ရွှေမြန်မာများ၊ စောင့်ပါစေ..
ဒေါ်စုဘ၀၊ မျိုးဖျက်မ၊ မရောက်ကြပါစေ...
ဒေါ်လာကိုမက်၊ သစ္စာပျက်၊ တစ်သက်ရှောင်ကြစေ...
အသားလောက်ထွက်၊ ဘ၀ပျက်၊ ရှက်တတ်ကြပါစေ..
မြှောက်ပေးတိုင်းဟောင်၊ ခွေးယောင်ယောင်၊ ရှောင်နိုင်ကြပါစေ...
အနောက်မျှော်ဝါဒ၊ ကျွန်ဘ၀၊ လွတ်မြောက်ကြပါစေ...
တပ်မတော်ကို၊ ချစ်စိတ်ပို၊ လိုအင်ဆန္ဒ ပြည့်ပါစေ...
၂၀၁၀ "ဒီ" လမ်းဝယ်၊ ရွေးချယ် အောင်ပါစေ...
မောင့်ကို ဆဲလာ၊ လူဗလချာ၊ ရန်ဘယာ ဝေးပါစေ...
မောင့်မေတ္တာစွမ်း၊ ကမ္ဘာလွှမ်း၊ ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ...
karin leader who dont know how many state and division in myanmar, he said myanmar division army leader explain pago division,mandalay division something......wherealot of bamar live.That mean army leader want to persuade and talk with low educated,unkownledge people.Army afraid to talk with high educated and knowledge full people e.g Daw Suu.
16 January 2010 at 16:17
23 January 2010 at 05:43
ဘဏ္ဒာ သူခိုး နအဖ